Ngoku ungakhanyisa i-C-Apps ZIP kuhlobo lwakho lweCyanogenMod | Zonke iinkonzo ze-intanethi
ICyanogen OS C-Apps ngoku ziyafumaneka kuye wonke umntu one-CM
Sele zikhona iinkampani ezininzi ezifuna indlela yokuzimela kwi-Android ukuze kungaxhomekeki kuGoogle kwimicimbi ethile yee-smartphones kunye neenkonzo zabo. Siyazi ukuba uHuawei uqhuba Inguqulelo yefoloko ye-Android ukuba kunokwenzeka iimpukane, kwaye yiSamsung uqobo ethwala ixesha kunye ne-Tizen OS yakho, nangona oku kuye kwahlulwa endaweni yokunxiba.
Enye into ezama ukusika intambo nge-Android yiCyanogen Inc. Phantsi kokuthandwa yiCyanogenMod ROM eyenzelwe izigidi zabasebenzisi kwihlabathi liphela, kancinci kancinci baye bakwazi ukuzimela ngakumbi, nangona uncedo oluvela kuMicrosoft. ICyanogenMod inee-C-Apps, usetyenziso olusemthethweni olusebenzayo ngeCyanogen OS, kwaye ngoku ziyafumaneka kuye wonke umntu kwiCyanogenMod 13.
Kwaye ngoku inkampani isungule iphakheji yeZip enakho kukhanya kwisiphelo sakho Ukuze ube ne-apps ezibizwa ngokuba yi-C-Apps, phakathi kwazo unokufumana izinto ezinomdla kakhulu ukuba wonke umntu onenguqulo ye-CM azi.
Singathetha ngeAudioFX, usetyenziso olunoxanduva lokubonelela I-24-bit ye-hi-fi yeaudiyo ngeenxa zonke, umzekeliso, iibhutsi zebhasi kunye noseto olu-13 ezahlukeneyo; Umxholo wokuKhetha kunye neeVenkile zeVenkile, usetyenziso olwenza ukuba ibe yeyakho i-desktop yakho enemixholo eyahlukeneyo enokuthengwa; Ukudayela ngeTruecaller, isidayeli esinomdla kakhulu esidibanise iTruecaller ekuvumela ukuba uchonge iifowuni ezingenayo njengogaxekile; Igalari, usetyenziso lwegalari yomfanekiso ngokwawo inoxanduva lokususa izinto eziphindiweyo; kunye neAkhawunti yeCyanogen, ekunika ukufikelela ku "Fumana ifowuni yam" kunye nokukwazi ukusula kude okanye ukutshixa ifowuni yakho ukuba uzifumanisa uyidinga.
Omnye umdla onomdla ukuqhubeka unlinking kwi-Android.
Ungafikelela kwi-C-Apps ukusuka apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » ICyanogen OS C-Apps ngoku ziyafumaneka kuye wonke umntu one-CM
Kancinci ekugqibeleni isungula usetyenziso lwayo olusemthethweni lwe-Android
I-ASAP Launcher sisiqalisi seapps esigxile kumakhadi